पोखरामा बाल अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्झौता | NepaleKhabar.com
पोखरामा बाल अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्झौता
February 23, 2020 | 8:41 pm
पोखरामा बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि पोखरा महानगर र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच)बीच आइतबार सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको रोहबरमा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी र किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले हस्ताक्षर गरे । किओचले सबै प्रदेशमा विशिष्टिकृत बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत यो पहिलो सम्झौता हो । यसपछि काठमाडौंमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रा.डा. कोइरालाले जानकारी दिए ।
सम्झौतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सबै वर्ग र तहका बालबालिकाको सहज पहुँच भएको र केन्द्रीय अस्पताल पे्रषण सम्पर्कसहितको बाल अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बाल अस्पतालका लागि पोखरा महानगरले वडा नं. २७ को कार्यालय रहेको भवन (साविक लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय)सहित ३७ रोपनी जग्गा ३० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । उक्त अस्पताल बनेपछि समग्र गण्डकी प्रदेशकै बालबालिकाका लागि उपचारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुरुवाती चरणमा ५० शैया रहने अस्पतालको शैया पछि सय पु¥याइने किओचका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. कोइरालाले जानकारी दिए । उनले अस्पताल निर्माणमा ४० देखि ५० करोडसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको पनि बताए । अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा लगायतका योजनासँग जोड्ने र सहजीकरण गर्ने जिम्मा पोखरा महानगरले लिएको छ । पोखरा महानगरका मेयर जिसीले बाल अस्पताल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन महानगरले गर्नुपर्ने काममा कुनै ढिलाई नहुने स्पष्ट पारे ।